Somalidu waxay ku maah maahdaa:Afxumo nabad way kaa kaxaysaa colaadna waxba kaagama tarto,waxa kale oo ay somalidu tidhaahdaa..amaano kugu raagtey xolahaada ayaa la moodaa..by Ahmed jama
Monday June 11, 2018 - 08:58:18 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Waxaa Cajaan,ib ah oo aan maanta ka daawadey website ka xumaantada fidiya ee boramanews hadalo deelqaafku ah dadka degaanka Xariirad oo ah beelweynta bahabarceli.
Hadaba waxaan leeyahay beeshan jibriil yoonis ee xumaan kataliska ah ee sheeganeysa dhul aaney degin waxaan odhanlahaa waar dadka beenta kadaaya,maantana umada reer somaliland wey ini ogtahay waxaad tihiin waana ceeb inaad sheegataan degaan aynaad u dhalan..
Iska hadlo ina igire jibriil yoonisow in badan ayaad ku macaashteen inaad mar eedaysaan madaxweyne ku xigeenka sharaftaleh ee shaqsiga ugu cadaalada badan,oo aad mar walba been cad aad ka sheegtaan oo aad tidhaahdaan waxaa naxumeeyey saylici,haddii aad awal wax ku heli jirteen maanta dalka waxaa madaxweyne ka ah mudan Muuse Biixi Cabdi oo og cid walba meesha ay degto...
Raga ka dambeeya iney qalalaaso ka abuuraan degaanka xariirad oo ay kiciyaan odayaasha jibriil yoonis waxaa kamid ah maayar ka degmada borama Maxamed Xuseen Maydhane iyo maayar ka degmada Saylac Sacad Daahir ciye lambadooduba waa kuwa ku bixinaaya kharashka dawlada si reer kooda jibriil yoonis ay u kiciyaan umada una kaladilaan dadka wada,dhashay ee jibriil yoonis iyo bahabarceli ...
Somalidu waxay tidhaahdaa...Ama afeef hore lahow ama adkaysi danbe
Reerka jibriil yoonis waxaan leeyahay waar ini ceeb looma dhinto oo reerkani ma xishoodo ,waxaan ognahay markii madaxweyne ku xigeenka qaranka JSL iyo xisbiga kulmiye ee uu ku guuleystey laga bilaabo 2010 reerkani wuxuu bilaabey iyagoodiidan madaxweyne ku xigeenka iney mar walba been cad ka sheegaan xitaa haddii wasiiradu ay waxbadalaan iney isku dayaan jibriil yoonis sidii eeda ay ugu soo leexin lahayeen mudane saylici laakiin aqli xumidooda kama waatoobaan in reer somaliland ay barteen beeshan.
Beeshan bahabarceli marnaba aqbalimeyso gardarada jibriil yoonis kana yeelimeno dalkan iney wax yeeleeyaan jibriil yoonis ,hore waxaan ogeyne beeshani iney isku dayeen iney dagaal galiyaan beelaha gadabuurssi laakiin wey ku fashilmeen arintaa maxaa keeney fashilka waxaa keeney reerkani ma degaan dhul hagaagsan taasana keentey keentey iney talaabo qaadi wayaan.
Reerkan ka soo talaabey xuduuda kililka 5 shanaad waxaynu ognahay in xilku meerto yahay dawladuna kolba qofkii ku haboon ama ay ugarato inuu xilka loo idmadey uu ka soo bixikaro ay u dhiibeyso beeshan jibriil yoonis waxay u barteen in dhamaan xilalka ugu badan gobolka Awdal,salal iyagoo tiroyar hadana ay haystaan.
Waxay reer somaliland ka dheragsanyihiin in suldaan waber uu u talaabey dhulkiisii itoobiya uu kana soo horjeedo qarannimada somaliland waxna uu ka qaadi waayey dawlada somaliland waayo? Reerkiisu wuxuu kadegaa somaliland wax kayar 20km . Markii ay yeelikari wayeen SL waxay bilaabeen iney maamulka la baxay Awdalstats iney meelahaa dibada horbodboodaan.